Ihe nrịbama nke China n'èzí LED nyere ọkụ maka ndị na-emepụta ihe nri na ndị na-ebubata ihe |Zhengcheng
Aha ngwaahịa: Mpempe akwụkwọ nchapụta ọkụ n'èzí
Gịnị kpatara ịhọrọ ngwaahịa anyị?
1. Anyị bụ ndị na-emepụta ihe ngosi igbe ọkụ.Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi mpaghara 4,200 square mita.Anyị pụrụ iche na mmepụta nke ụzọ akara.Anyị nwere ahụmahụ bara ụba na mmepụta na mmepụta.Na mgbakwunye, ọ nweghị ndị etiti ga-enweta ọrụ.Anyị ga-enye gị ọnụahịa kacha mma.
2. Mpempe akwụkwọ acrylic anyị na-eji bụ Mitsubishi acrylic mpempe akwụkwọ si Japan iji hụ na àgwà ngwaahịa ahụ dị oke elu.Ngwaahịa anyị agaghị enwe nkwarụ ma ọ bụ daa mbà mgbe afọ 3-5 gachara.
3. Igbe ọkụ nke Zhengcheng na-agbaso ụkpụrụ modular, a na-emechi ahụ igbe ahụ, enweghị mmiri kpamkpam, ọ gaghị emetụta iji tube tube.
Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd bụ onye na-emepụta ọkachamara na igbe akara ọkụ na-echekwa ume maka ụlọ ahịa dị mma, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ọgwụ, ihe nri.Ebe ọ bụ na e guzobe ya, ụlọ ọrụ ahụ enwetala 4 patents nke mba na ụlọ ahịa dị mma nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.Ụlọ ọrụ anyị nwere ụlọ ọrụ ọkachamara na mpaghara nke 4200 square mita na 4 ìhè igbe na-akpụ mmepụta ahịrị.Zhengcheng na-eje ozi ugbu a karịa ụdị 100 na China ma na-emepụta ihe dị ka mita 30,000 nke igbe ọkụ na-azọpụta ike kwa afọ.
Nke gara aga: Ụlọ ahịa ụlọ ahịa n'ihu
Osote: Acrylic mgbasa ozi na-azọpụta ike igbe akara
Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Akara ngosi, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Ihe nrịbama ụlọ ahịa, Igbe nrịbama nke mpụga, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ,